DHAMAAD! Waayihii, Taariikhihii, Rikoodhadii Iyo Farxaddii Messi & Ronaldo Oo Soo Dhamaaday & RIKOODHKA Madow Ee Loo Hayo | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueDHAMAAD! Waayihii, Taariikhihii, Rikoodhadii Iyo Farxaddii Messi & Ronaldo Oo Soo Dhamaaday & RIKOODHKA Madow Ee Loo Hayo
DHAMAAD! Waayihii, Taariikhihii, Rikoodhadii Iyo Farxaddii Messi & Ronaldo Oo Soo Dhamaaday & RIKOODHKA Madow Ee Loo Hayo
Cahdigii ay dunida kubadda cagta u talinayeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa soo dhamaaday, waxaana markii ugu horreysay ay ka maqnaanayaan tartanka Champions League wareegyadiisa siddeedda, labada iyo finalka oo aan midkoodna lagu arki doonin.
Xiddigaha reer Portugal iyo Argentina ayaan marna ka wada maqnaanin wareegga siddeedda ee tartanka Champions League muddo 16 sannadood ah, laakiin markan midna laguma arki doono.
Cristiano Ronaldo oo usoo ciyaaray Manchester United iyo Real Madrid ka hor intii aanu u wareegin Juventus ayaa si joogto ah u imanayay ugu yaraan wareegga siddeedda laga soo bilaabo xilli ciyaareedkii 2004-05, waxaana muddadaas uu ku guuleystay shan jeer tartanka Champions League.
Manchester United ayuu lasoo qaaday Champions League ka hor intii aanu usoo wareegin Real Madrid oo ka bixisay lacagtii rikoodh jabis ahayd oo waqtigaas ka dhigtay ciyaartoygii ugu qaalisanaa abid, waxaana uu Los Blancos ka caawiyey afar Champions League oo ay saddex ka mid ahi isku xigeen.
Laakiin Juventus oo iibsatay sannadkii 2018kii maalmo kaddib markii uu Real Madrid la qaaday Champions League ayaa uu niyadjab ku qaadanayaa, waxaanay sannadkan u tahay midkii ugu xumaa.
Salaasadii ayay FC Porto canaantii ugu weynayd usoo jiidday Ronaldo kaddib markii ay tartanka Champions League ka cidhib-tirtay Juventus, iyadoo laacibkanna lagu eedeeyey inuu qayb ku lahaa goolkii sababta u noqday in kooxdiisu hadho.
Ronaldo ayaa Salaasadii macasalaameeyey Champions League oo maraya wareegga 16ka tartan xilli ciyaareedkii 2004-05.
Lionel Messi ayaa isaguna taariikh madow loo diiwaangeliyey, kulankii ay kooxdiisu kaga hadhay Champions League ee ay PSG ku garaacday 5-2 isku darka labadii lugood.
Xiddiga reer Argentina ayaa rikoodhe ka khasaariyey kooxdiisa, sidoo kalena lumiyey fursad dahabi ahayd inkasta oo dhaliyey hal gool oo aan waxba tarin.
34 jirkan ayay u ahayd markii ugu horreysay tan iyo 2004-05 oo ahayd waqtigii uu soo baxay, in kooxdiisa Barcelona ay ku hadho wareegga 16ka ee tartanka Champions League.
Si kastaba, in Messi iyo Ronaldo ay ku hadhaan halkan markii ugu horreysay tan iyo waqtigaas, waxay ka dhigan tahay inuu dhamaad yahay waayahoodii ciyaareed, isla markaana ay hoos u dhaceen naadiyadoodii.
Maxamed cabdilaahi says:
Cr7 waa gaboobay
Maaha marki ugu horaysay e messi ku hadho 16 ka wa marki labaad 2006_2007 liverbool aya ku reebtya warega 16ka waxana tababare u aha frank rijkad oo holand ah sido kle mantana wxa ah tobare koamand o holand u dhashay isagna madaxwaynaha wakhtigasna wxu aha midkan imika dib looso doortay juan laborta